President of indonesia.election.and.myanmar
Puntiko futbol txapelketa 2014 uz... by Pat Berga 239 views
Marcileneribeiro unidade i-ativ5 by marcilenealves 322 views
Maduración y conservación de fruver... by 10861348 582 views
Cc sistemaslol by Camila Salazar 169 views
Pop-up Banner Colorful Text by John Fichera 146 views
Estatuto criança adolescente_comentado by Agassis Rodrigues 946 views
Indonesia President Election, Joko Widodo vs Pravomo. Economic, Politic, Corruption , Press Freedom ..etc
1. 7/19/2014 President of Indonesia, Press Freedom, Corruption and Income http://mingalaronline.biz/stories/indo.president.vs.constitution.court.htm 1/4 အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက် ပွဲ၊ သတင်းစာလွတ် လပ်ခွင့်နဲ့မြန်မာ ကမ္ဘာ့ တတိယအကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီး (လူဦးရေ ၂၃၇သန်း) အင်ဒိုနီးရှား၊ြ ပည် သူတိုက် ရိုက် တင်မြှောက် တဲ့ သမ္မတရွေးကောက် ပွဲမှာ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့ပရာဗိုဝြို ပိုင်ကြပါတယ် ။ အရပ်သား၊နောက် ကြောင်းရှင်းတဲ့ ဂျာကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့ စစ်ဗိုလ် ချုပ်ဟောင်း၊ အာဏာရှင်ဟောင်းဆူဟာတိုရဲ့ သားမက် ဖြစ်သူပရာဗိုမိုနှစ်ယောက် မှာ ဂျိုးကိုဝီကို လူကြိုက် များကြပါုတယ် ။ မဲစစ်တမ်းများအရ ဂျိုကိုဝီအပြတ် အသတ် သာ နေရာက၊ ရွေးကောက် ပွဲ မတိုင်မီတစ်လအတွင်း ပရာဗီုဝို အဖွဲ့သားများ၊ နည်းမျိုးစုံနဲ့မဲဆွယ် ပွဲများ လုပ်ရာက ၄၇ %ြ ဖစ်လာပါတယ် ။ တကယ် ပြိုင်ပွဲမှာ မဲရုံများက ထုတ် ပြန်ချက် ကို လုပ်အားပေးများက လက် နဲ့ပြန်ရိုက် နှိပ်ပေးတဲ့ Quick Count စာရင်းများအရ ၊ ဂျိုကိုဝီက ခန့်မှန်းထားတဲ့ အတိုင်း ၅၂% - ၄၈ % အနိုင်ရတယ် လို့ ကြေညာပါတယ် ။ (www.kawalpemilu.org) ရွေးကောက် ပွဲကော် မရှင် (KPU) ဇူလိုင်၂၂ တရားဝင်ကြေညာမဲ့အချိန်ကိုေ စာင့်နေကြပါတယ် ။ စတော့ ဈေးကွက် နဲ့ရင်းနှီးမြှတ် နှံသူများက ဂျိုကိုဝီိအနိုင်ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကိုကြိုဆိုကြပါတယ် ။ စစ်အာဏာရှင်အရိပ် မကင်းတဲ့ ပရာဗိုဝိုအနိုင်ရရင်တော့ ၊ ရင်းနှီးမြှတ် နှံသူတွေ သူတို့ရင်းနှီးခဲ့မှုတွေကိုရောင်းချကြမယ် လို့ ဂျာမန်ဘဏ် Deutsche Bank ထံမှ သတင်း ထွက် နေပါတယ် ။ ငွေ-အာဏာရှင်များက အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးမှာ ကြီးစိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ အာဏာရှင်ဟောင်းကြီး ဆူဟာတို လက် ထက် ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သူဂိုကာပါတီဥက္ကဌ Bakrie ဆိုသူဟာ၊ လက် ရှိသမ္မတ ယူဒိုရိုနိုအစိုးရအဖွဲ့မှာ၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဖြစ် သြဇာလွမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ တကယ် လို့ ဂျိုကိုဝီသမ္မတဖြစ်လာရင်၊ ပါလီမန်မှာ အမတ် အများစုရအောင် ညွှန့်ပေါင်းဖွဲ့ရမယ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျိုကိုဝီသမ္မတဖြစ်ပြီး အစိုးရမှာ သူ့ကိုထည့် သွင်းဖို့ Bakrie ပြောဆိုထားပါတယ် ။ ဂျိုကိုဝီ အဖွဲ့သားများက အစိုးရဖွဲ့ရင် ဒီမိုကရေစီအရှိန်ဟုန် မြှင့်တင် သွားဖို့ရှိပါတယ် ။ တကယ် လို့ရွေးကောက် ပွဲကော် မရှင်က ဂျိုးကိုဝီအနိုင်ရတယ်ကြေညာရင်၊ ပရာဗိုဝိုအဖွဲ့က အခြေခံဥပေဒတရားရုံးမှာ ကန့်ကွက် စာ တင်မယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ နည်းလမ်းရှိသမျှနဲ့၊ငွေအားကိုပါ သုံးပြီး အနုင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ြ ဖစ်ပါတယ် ။ ဘီဘီစီနဲ့ ပရာဗိုမိုလတ် တလော အင်တာဗျူးရာမှာ ၅% - ၇% အသာရနေတယ် ဆိုပေမဲ့ "သူတို့ရတဲ့ မဲများဟာ ဘက် လိုက် ခြင်း၊ ကြောင်ငြာခြင်း" များကြောင့်ပါ လို့ြေ ဖပါတယ် ။ မဲပေးမှုမတရား တာတွေရှိကြောင်း သူတို့ဆီသတင်းပို့မှုတွေ ရရှိတယ် ၊ မမှန်မကန်မှုများဟာ အင်ဒိုနီးရှား အဂတိတိုက် ဖျက် ရေးအဖွဲ(KPK) အဖွဲ့နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ် ။ အနိုင်အရှုံးကြေငြာလို့ ပရာဗိုဝိုရှုံးလို့ အခြေခံဥပေဒတရားရုံး ကိုတင်မယ် ဆိုရင်၊လောလောဆယ် အခြေခံဥပဒေတရားရုံး အကြီးကဲဟာ လတ် တလော ကပဲ အဂတိလိုက် စားမှုနဲ့ထောင်တစ်သက် ချခံ ထားရပါတယ် ။ လက် ရှိအကြီးကဲ Hamdan Zoelva ကတော့ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးမယ် လို့ဆိုပါတယ် ။ အခြေခံဥပေဒ တရားရုံး ဆီရောက် လာရင်၊ တရားသူကြီး၉ဦး အဖွဲ့ဟာ ၁၄ရက် အတွင်း ဖြေရှင်း ပေးရမယ် ဖြစ်ပြီး၊ ဒီဆုံးဖြတ် ချက် သာ အတည် ဖြစ်ပါမယ် ။ မြန်မာပြည် မှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားလောက် ဒီမိုကရေစီမခိုင်မြဲသေးပါဘူး။ သို့သော် သမ္မတဖြစ်သူက စိတ် ကောင်းရှိ၊ သတ္တိရှိ၊ မျှတမှု ရှိရင် အင်ဒိုနီးရှား ဒီမိုကရေစီအဆင့်ကိုနှစ်တိုတိုအတွင်း မှီနို င်ပါတယ် ။
2. 7/19/2014 President of Indonesia, Press Freedom, Corruption and Income http://mingalaronline.biz/stories/indo.president.vs.constitution.court.htm 2/4 Wikipedia.com အင်ဒိုနီးရှားသတင်းစာလွတ် လပ်ခွင့် အထက် ပါအတိုင်းရွေးကောက် ပွဲ လွတ် လပ်တဲ့ မဲရေတွက် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၂ခုနဲ့ မဲဆွယ် ၊ မဲနိုင် သတင်းများကိုမီဒီယာပေါင်းစုံက လွတ် လပ်စွာ သတင်းတင်ပြနိုင်ပါတယ် ။ ဒါလောက် လွတ် လပ်ပေမဲ့ ကြွယ် ဝတဲ့ အာဏာရှင်ကြီးများက နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သားမှုမရှိအောင် လုပ်လျှ က် ရှိပါသေးတယ် ။ အာဏာရှင်ဆူဟာတို ၁၉၉၇ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုနဲ့နှုတ် ထွက် သွားပြီး၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ် တက် လာပါတယ် ။ သမ္မတ လေးဆက် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ ယခုနောက် ဆုံးသမ္မတ ယူဒိုယိုနိုလက် ထက် မှာ ၁၇နှစ်အတွင်း၊ တည် ငြိမ်မှုများစွာ ရရှိလာပါတယ် ။ အဂတိလိုက် စားမှုဟာ ကြီးမားတဲ့ အခက် ခဲကြီး ဖြစ်နေပေမဲ့၊ အထူးသဖြင့် မီဒီယာ (စာနယ် ဇင်း၊ အသံလွှင့်) လွတ် လပ်ခွင့်ကတော့ အများကြီးတိုးတက် ခဲ့ပါတယ် ။ စာနယ် ဇင်း။ လွတ် လပ်ခွင့်များပေးထားတဲ့ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် ၊ စာစောင်များစွာ ထုတ် ဝေ၊ဖြန့်ချိလျှ က် ရှိပါတယ် ။ ဂျာဗားကျွ န်း အခြေပြုတဲ့ နေ့စဉ် သတင်းစာပေါင်း ၅၀ခန့်ထုတ် ဝေလျှ က် ရှိပါတယ် ။ ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် ၊ စာစောင်များ အင်ဒိုနီးရှား တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိပါတယ် ။ စောင်ရေ အများဆုံး Kompas (စောင်ရေ ၅သိန်းကျော် )၊ Suara Mardeka (စောင်ရေ၂သိန်း)၊ Berita Buana , Sinar, Pikiran (စောင်ရေ၁သိန်းခွဲ) ..စသဖြင့် ထုတ် ဝေကြပါတယ် ။စောင်ရေ ၄သောင်းကျော် နဲ့ Jakata Post, Jakata Globe, Tempo , Gatra .စတဲ့ အပတ် စဉ် မဂ္ဂဇင်းများရှိပါတယ် ။ တီဗွီ။ အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြား TVRI, ပုဂ္ဂလိက RCTI, Indosiar, RCTI, SCTV, Metro TV, Trans 7, Global TV, MTV Indonesia, MNCTV, Bali TV, Jak TV, and Pacific TV ..etc. စသည် တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖလင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ကိုလဲ ဖြက် သိမ်းခဲ့ပါတယ် ။ ရေဒီယို။ အစိုးရရေဒီယိုအစီအစဉ်နဲ့အတူ၊ အင်ဒိုနီးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပေါင်း ၃ထောင်ကျော် လိုင်စင်ချပေး၊ အသံလွှင့်လျှ က် ရှိပါတယ် ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တရားမဝင်အသံလွှင့်၊တီဗွီ၊စာနယ် ဇင်း ထောင်နဲ့ချီရှိပါတယ် ။ ၂၀၀၃ ကစပြီး၊ အစိုးရက လိုင်စင်လျှောက် ဖို့ တိုက် တွန်း၊ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ် ။
3. 7/19/2014 President of Indonesia, Press Freedom, Corruption and Income http://mingalaronline.biz/stories/indo.president.vs.constitution.court.htm 3/4 မြန်မာမီဒီယာနှင့်စာနယ် ဇင်း ၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၀မှာ မီဒီယာလွတ် လပ်ခွင့် အဆင့် ၁၇၄ (အဆိုးဆုံး) ရှိနေရာကနေ ၁၄၅ တိုးတက် လာခဲ့ပါတယ် ။ ဗီယက် နမ်၊ တရုပ်ထက် အများကြီးသွားပါတယ် ။ အစိုးရသတင်းစာကြီး ၃ခုမှာ မြန်မာလိုထုတ် ဝေတဲ့ ပုံစံတူမြန်မာ့ အလင်းနဲ့ကြေးမုံ၂စောင်၊ အင်္ဂလိပ် New Light of Myanmar တစ်စောင်ရှိပါတယ် ။ ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်သတင်းစာများ ၂၀၁၂မှ စတင်လိုင်စင်ထုတ် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ Eleven Media, The Voice Daily, Golden Fresh Land, The Standard Time Daily, The Union Daily စသည် တို့ ထုတ် ဝေနေပါတယ် ။ ဂျနယ် ၊ မဂ္ဂဇင်းများစွာ ထုတ် ဝေခွင့်ပေးနေပြီး၊ ရခိုင်၊ရှမ်းပြည် နယ် များမှာ တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ် ဝေခွင့် ပေးထားပါတယ် ။ တီဗွီနဲ့ရေဒီယိုမှာတော့ အစိုးရပဲ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ြ မဝတီ(စစ်တပ်) တို့ပဲချုပ်ကိုင်ထားပါတယ် ။ Skynet ပုဂ္ဂလိက တီဗွီ၊ တရုပ်ဖက် စပ် လုပ်ငန်းက တစ်ဦးထဲ တီဗွီလက် ဝါး အုပ်ထားလို့၊ြေ ပာစရြာ ဖစ်နေပါတယ် ။ ရေဒီယိုမှာတော့ အစိုးရရဲ့ မြန်မာ့ အသံနဲ့ ဖြေဖျော် ရေး City FM ရှိပါတယ် ။ အင်တာနက် ကို ၂၀၁၁မှာ အပြည့် အဝ ဖွင့်ပေး လိုက် တဲ့ အတွက် မြန်မာများ လွတ် လပ်တဲ့ မီဒီယာ အသီးအပွင့်ကို အပြည့် ဝခံစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဇူလိုင်-၂၀၁၄မှာ ယူနတီသတင်းအဖွဲ့ ၄ဦးကိုလျှို့ဝှက် ချက် ဖောက် လို့ဆိုပြီး၊ ထောင်၁၀နှစ် ချတဲ့ အတွက် အမေရိကန် လက် ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရန်ကုန်ရောက် ချိန် ပြင်းထန်စွာ၊ ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၃၊ မီဒီယာလွတ် လပ်ခွင့် (Press Freedom Index, 2014) အမေရိကန် ၄၆ တိုင်ဝမ် ၅၀ တောင်ကိုးရီးယား ၅၇ ထိုင်း ၁၃၀ အင်ဒိုနီးရှား ၁၃၂ ကမ္ဘောဒီယား ၁၄၄ မြန်မာ ၁၄၅ မလေးရှား ၁၄၇ စင်ကာပူ၁၅၀ ဗီယက် နမ် ၁၇၄ တရုပ် ၁၇၅ မီဒီယာလွတ် လပ်ခွင့်၊ အဂတိနဲ့တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ စာနယ် ဇင်းလွတ် လပ်ခွင့်မှာ အင်ဒိုနီးရှားကိုမှီပြီး၊ စင်ကာပူ၊မလေးရှားထက် သာတယ် ဆိုပြီး၊ပျော် မနေဖို့ပါ။ငွေမရတဲ့ စာနယ် ဇင်းလွတ် လပ်ခွင်ပါ။အောက် က ဇယားကို ချမ်းသာတဲ့ မြန်မာများ ကိုယ် ချင်းစာတရားနဲ့ အမြဲကြည့် တတ် ပါစေ။ အဂတိလိုက် စားမှုနဲ့ြ ပည် သူလူထုဝင်ငွေကတော့နောက် ဆုံးမှာပဲ ရှိနေဆဲပါ။ ဝင်ငွေနည်းပြီး၊ အလုပ်မရှိ၊လျှောက် ပြော၊ ရေးခွင့်ပေးရင်လဲ ဒေါသထွက် နေတဲ့ လူတွေကိုထိမ်းရခက် ပါတယ် ။
4. 7/19/2014 President of Indonesia, Press Freedom, Corruption and Income http://mingalaronline.biz/stories/indo.president.vs.constitution.court.htm 4/4 နိဂုံး Tempo မဂ္ဂဇင်းမှာ အင်ဒိုနီးရှားအချမ်းသာဆုံး သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Winata , အထည် စက် ရုံကိုမီးလောင်စေပြီး၊ ဈေးကွက် လက် ဝါးကြီးအုပ် အမြတ် ထုတ် တဲ့ သတင်း တင်ပြမှုကြောင့်၊ လူ၂၀၀အုပ်စုဝန်ထမ်းများကိုထိုးနှက် ၊ နှိပ်စက် ပြီး မဂ္ဂဇင်းတိုက် မီးရှို့ဖို့ကြိုးစားပါတယ် ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းလစ်လျူပြုခဲ့ပါတယ် ။ သူဌေးကြီး Winata ရဲ့ ငွေ-အာဏာသုံးပြီး၊ တရားစွဲဆိုမှုကိုအယ် ဒီတာချုပ် Harymurti ခံရပါတယ် ။ထောင်၁နှစ်၊ ဒဏ် ငွေ ၅သောင်း တရားရုံးကြ ပစ်ဒဏ် ချမှတ် ပေမဲ့၊ နိုင်ငံတော် အမြင့်ဆုံးတရားရုံးက ၂၀၀၅ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ Harymurti ကိုလွှတ် ပေးလိုက် ပါတယ် ။ အင်ဒိုနီးရှား ဂျာနယ် လစ်စ် များရဲ့ အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီမိုကရေစီခရီးကြို မန်မာထက် ရှေ့ရောက် နေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ အရပ်သားသမ္မတ ဂျိုကိုဝီ မဲအနိုင်တဲ့ အတိုင်း၊ ရွေးကောက် ပွဲကော် မရှင်က သမ္မတအဖြစ် ဇူလိုင်၂၂ရက် နေ့မှာကြေညာမယ်မျှော် လင့်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည် မှာလဲ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းလျှောက် နေချိန် ဂျိုကိုဝီ ကဲ့ သို့ မှန်ကန်တဲ့ စီးပွားရေးသမား တဖြစ်လဲ နိုင်ငံရေးသမားများစွာ ပေါ်ထွက် လာပြီး၊ နေရာရလာဖို့ နီးစပ်ပါပြီ။ ဇော် အောင်(မုံရွာ)
5. 7/11/2014 Indo ex-Finance Minister 2014 http://www.mingalaronline.biz/stories/indo.finance.minister.htm 1/3 ဒီမိုကရေစီမြန်မာထက် ၁၅နှစ်စောတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်း အင်ဒိုနီးရှားဒီမိုကရေစီ၁၅နှစ်ကြာပါပြီ၊ ဗီယက် နမ် ၂၀နှစ်၊ တရုပ် ၂၄နှစ်လောက် ရှိပြီ၊ မြန်မာ၃နှစ်ကြာပြီ၊ ဒီလိုပဲ ငွေရှင်တွေကကြီးစိုးတာပါပဲ။ အမေရိကန်လွတ် လပ်ရေး ဂျော့ ခ်ျဝါရှင်တန် ၈နှစ်သမ္မတ စလုပ်တုန်းကလည်း၊ ဒီလိုငွေရှင်ကြီးတွေကိုကြီးစိုးလာလို့၊ သူဌေးကြီးများကိုအစိုးရပညာပေးခြင်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည် တည် ထောင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဂျပန်၊ဂျာမဏီတို့ စစ်ရှုံးကုန်းကောက် စရာမရှိတော့ ပေမဲ့၊ လူတော် လူကောင်းတွေ ခေါင်းဆောင်ကြတော့ ၁၀နှစ်အတွင် ကမ္ဘာထိပ်တန်းကိုပြန်ရောက် လာကြပါတယ် ။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတယူဒိုရိုနို အဂတိတိုက် ဖျက် မယ် ကြွေးကြော် ၊ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ သမ္မတဖြစ်လာပါတယ် ။ သမ္မတက အလွန်တော် တဲ့ စီးပွားပညာရှင်၊ ဘယ် ပါတီမှလဲမပါတဲ့ ၊ စိတ် ဓါတ် ကောင်းမြတ် တဲ့ ကလေး၃ယောက် မိခင် Sri Mulyani Indrawati ကိုဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးခန့်လိုက် ပါတယ် ။ ဒီအမျိုးသမီးဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားလို့ နာမည် ကြီးပါတယ် ။ အရပ်သားပညာရှင်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်တပ်၊ခရိုနီများနဲ့ ကင်းရှင်ပါတယ် ။ အရမ်းတိုးတက် လာပါတယ် ။ သူမ အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ် မှာ စီးပွားရေးဘွဲ့ရရှိပြီး၊ အမေရိကန်၊ အီလီနွိုက် တက္ကသိုလ် က မာစတာနဲ့ပီအိတ် ဒီဒေါက် တာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ အချိန်ပိုင်းတက္ကသိုလ် ဆရာ ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာငွေကြေးအဖွဲ့ IMF အရှေ့တောင်အာရှ၁၂နိုင်ငံတာဝန်ခံ ဒါရိုက် တာလူကြီး လုပ်နေစဉ်မှာ ၊ အဂတိတိုက် ဖျက် ရေးလုပ်မဲ့ သမ္မတယူဒိုရိုနိုက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်၊ ပြက် သားစွာလုပ်ဖို့ ဖိတ် ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအမျိုးသမီးလက် ထက် မှာ အစကောင်းခဲ့ပေမဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ခရိုနီများရဲ့ တွန်းအားဒဏ် ကို၅နှစ်ခံပြီး၊ အလုပ်ကထွက် သွားရပါတယ် ။ ဒါလောက် တောင် လာဘ် စားမှုကိုတိုက် ခိုက် တဲ့ ၊ အာဂအမျိုးသမီးကြီးကိုငွေရှင်၊ အာဏာရှင်အုပ်စုကြီးနဲ့ ၅နှစ်ကြာအောင် ခုခံ၊ကြိုးစားပြီး၊ နောက် ဆုံးအလုပ်က နှုတ် ထွက် သွားပါတယ် ။
6. 7/11/2014 Indo ex-Finance Minister 2014 http://www.mingalaronline.biz/stories/indo.finance.minister.htm 2/3 သူမ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးလုပ်တဲ့ ခေတ် ကာလမှာ၊ ပထမနှစ်မှာပဲ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှုFDI foreign direct investment $4.6 billon ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ နောက် နှစ်မှာ $8.9 billion တိုးတက် ရရှိပြီး၊ Euromoney မဂ္ဂဇင်းရဲ့ တနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံး ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကျော် Forbes Magazine ရဲ့ the most powerful woman in the world ကမ္ဘာ့ သြဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီး အဆင့်၂၃ အဖြစ် သတ် မှတ် ခံခဲ့ရပါတယ် ။ တိုင်းပြည် အရံငွေကြေး US$ 50 billion အထိအမြင့်ဆုံးရောက် လာပါတယ် ။ အကြွေး 60% of GDP ကနေ 30% အထိလျှော့ ချနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှတ် နှံသူများကိုယုံကြည် အောင်၊ ဥပဒေများပြုပြင် ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းများ၊ အထူးသဖြင့် အခွန်ဌာနဝန်ထမ်းများကိုလောက် ငှအောင်၊ လစာနဲ့ခံစားခွင့်များ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းနဲ့ လာဘ် စားမှုနည်းပါးစေခဲ့ပါတယ် ။ သမ္မတယူဒိုရိုနိုဒုတိယအကြိမ်ရွေးကောက် ခံရတဲ့ ၂၀၁၀မှာ သူမကိုပဲ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဆက် ခန့်ပါတယ် ။ သူ့လက် ထက် မှာ ကုမ္ပဏီကြီးများနဲ့အခွန်ကောက် နိုင်ရုံမက၊ ချမ်းသာကြွယ် ဝတဲ့ တဦးချင်းကြွယ် သူများစွာကိုလည်းအခွန်ကောက် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ၅နှစ်အတွင်း တစ်ဦးချင်းအခွန်ဆောင်တဲ့ ဝင်ငွေကောင်းသူပေါင်း ၄.၃သန်းကနေ ၁၆သန်းအထိအခွန်ဆောင်ဦးရေ တိုးတက် စေခဲ့ပါတယ် ။ သူမ ၂၀၁၂မှာ ဝန်ကြီးရာထူးက ထွက် ခွာရခြင်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားမှာအကြွယ် ဝဆုံးဆိုတဲ့ Bakrie (အာဏရှင်ဟောင်း ဆူဟာတိုရဲ့ လက် ရုံးဖြစ်တဲ့ ဂိုကာပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ) နဲ့ငွေ-အာဏာရှင်များရဲ့ တိုက် ခိုက် မှုများကြောင့် လို့ဆိုပါတယ် ။ အဂတိလိုက် စားမှု နည်းပါးရေးကိုသမ္မတယူဒိုယိုနိုက အထူးဆောင်ရွက် ခဲ့ပေမဲ့၊ ထင်သလောက် မတိုးတက် ခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့မှာ Barkrie လိုလူမျိုးက ရာထူးကြီးရနေပြီး၊ အဂတိတိုက် ဖျက် ရေးကော် မရှင် (KPK) ကိုလဲ သမ္မတက ကာကွယ် ပေးထားမှုမရှိတဲ့ အတွက် ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲဖြစ်နေပါတယ် ။ အထက် ပိုင်း အရာရှိကြီးများစွာ လဘ် ပေးမှုနဲ့ ပတ် သက် နေခြင်းဟာ အခက် ခဲဖြစ်နေပါတယ် ။ သူ့လက် ထက် ၂၀၀၈မှာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဆူဟာတိုရဲ့ သားတစ်ဦး တွမ်မီဆူဟာတိုTommy Suharto ထံက ဒေါ်လာ ၁၃၄သန်း၊ နို င်ငံတော် ကို ပြန်အပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ် ၊ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူကြွယ် ဖြစ်သူတွမ်မီဆူဟာတိုကလည်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို တရားပြန်စွဲပါတယ် ။ တွမ်မီက လူ၂ယောက် ငှားပြီး တရားသူကြီးကိုသတ် မှုနဲ့ ထောင်၁၅နှစ်ကျ ပြီး၊ လျှော့ ရက် နဲ့ ၄နှစ်အကြာလွတ် လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုငွေ-အာဏာရှင်များစွာ ကြားးမှာ သန့်ရှင်းသူ အစိုးရဝန်ကြီးအဖြစ် နာမည် ရခဲ့ပါတယ် ။ ဝန်ကြီးအသစ်အဖြစ် အကြီးဆုံးဘဏ် ဖြစ်တဲ့ Bank Mandiri ရဲ့ အကြီးကဲ CEO Bank Mandiri ကိုခန့်ပါတယ် ။ ဝန်ကြီးရာထူးက ထွက် သွားပြီးတဲ့ နောက် မှာ လာဘ် စားမှုကင်းတဲ့ သူမကိုအတိုက် ခံများက၊ Bank Century ကယ် ဆယ် ခြင်းကိုအမှုဆင်ပြီး၊ လာဘ် စားမှုနဲ့တရားစွဲဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ် ။ သမ္မတ အကာကွယ် ရရှိတဲ့ အတွက် တရားစွဲမခံရပါဘူး။ သူမရဲ့ နောက် အလုပ်သစ်ကတော့ ကမ္ဘာ့ ဘဏ် -အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ အကြီးကဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဝန်ကြီးရာထူးက အတိုက် ခံများကြောင့် ထွက် လိုက် ရပြီး၊ တရားစွဲခံရမဲ့အရေးကလဲ လွတ် မြောက် ခဲ့ပါတယ် ။ အခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတသစ်ရွေးကောက် ပွဲမှာ ပြည် သူလူထုကြားက တက် လာတဲ့ ဂျိုကိုဝီဆိုသူ၊
7. 7/11/2014 Indo ex-Finance Minister 2014 http://www.mingalaronline.biz/stories/indo.finance.minister.htm 3/3 ဂျာကာတာမြို့ဝန် နဲ့ သူဌေးနိုင်ငံရေးသမား၊ စစ်ဗိုလ် ချုပ်ဟောင်း ပရာဗိုဝိုတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ် ။ အပြတ် အသတ် ဂျိုကိုဝီအနိုင်ရမယ် လို့ မှန်းထားပေမဲ့ အလွန်တိုတောင်းတဲ့ အချိန်အတွင် ငွေ- အာဏာရှင်များက၊ စစ်တပ်နဲ့လူထုအားပေးမှုကိုတမဟုတ် ချင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ပရာဗိုဝိုရဲ့ဇနီးဟာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဆူဟာတိုရဲ့ သမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုလား၊ အားပေးသူဖြစ်ပါတယ် ။ ဇူလိုင်၉၊ သမ္မတရွေးကောက် ပွဲပြီးတဲ့ အချိန် ဂျိုကိုဝီဖက် သားများက ၅၃-၄၈ ရာနှုန်းနဲ့ အနိုင်ရတယ် ဆိုပေမဲ့၊ ဗိုလ် ချုပ်ကြီးဟောင်း ပရာဗိုဝိုဖက် သားများက သူတို့အနိုင်ရတယ် လို့ ကြေငြာပြန်ပါတယ် ။ ဇူလိုင်၂၂ရက် မှာ ရွေးကောက် ကော် မရှင်က ကြေငြာမဲ့ ရလဒ်ကိုလိုက် နာဖို့၊ လောလောဆယ် နှစ်ဘက် အုပ်စုထိန်းသိမ်းကြဖို့ လက် ရှိသမ္မတ ရိုဒိုယိုနိုက တစ်ဦးစီနဲ့တွေ့ဆုံတိုက် တွန်းထားပါတယ် ။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းမှာ အခွန်ကောက် ခြင်း၊ အစိုးရပရိုဂျက် ကြီးများ စနစ်တကျ လုပ်တဲ့ အတွက် တိုင်းပြည် စီးပွားတတ် လာပေမဲ့၊ လာဘ် စားမှုများ အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့်အစိုးရပိုင်းမှာ ငွေမဲခဝါချခြင်းများကြောင့် တိုင်းပြည် တိုးတက် မှုနည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Sri Mulyani ဘယ် လောက် ကြိုးစားပေမဲ့ သူမရဲ့ နိုင်ငံဟာ ငွေကြေးခ၀ါချမှုစောင့်ကြည့် ရေးအဖွဲ့ (The Financial Action Task Force- FATF) ရဲ့ စံနှုန်းကိုမမှီတဲ့ အတွက် (ငွေမဲ၊ အခွန်လွတ် နေသူတနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေ ခိုးယူနေတဲ့ လူတွေ၊ အကြမ်းဖက် အားပေးတဲ့ လူတွေ) အများပြားရှိနေတယ် လို့ သတ် မှတ် ခံရပါတယ် ။ ၂၀၁၂ မှာ ထိုင်း၊ ဗီယက် နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာတို့ ငွေခဝါချတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် သတ် မှတ် ခံရပြီး အခု၂၀၁၄မှာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာ ၂နိုင်ငံ၊ နာမည် ပျက် စာရင်း Black List ထဲကမထွက် နိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ် ။ မြန်မာပြည် ထက် ၁၅နှစ်စောပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနိးရှား၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာအစိုးရလည်းကမ္ဘာ့ ဘဏ် ၊ အိုင်အမ်အက် ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များရဲ့ အကြံပေးချက် နဲ့ ခေါင်းခံလုပ်နိုင်မဲ့ ထူးချွန်သူအရပ်သားဝန်ကြီးများ လိုအပ်ပါတယ် ။ အမျိုးသားများ ငွေ-အာဏာပြိုင်နေချိန်မှာ ထူးချွန်သူအမျိုးသမီးက ကြားခံဖြန်ဖြေခြင်းနဲ့ တိုင်းပြည် တိုးတက် ပေမဲ့၊ ငွေ-အာဏာရှင်များရဲ့ ဒဏ် ကိုမခံနိုင်တော့ ရာထူးကထွက် လိုက် ရပါတယ် ။ ပါတီစွဲမရှိပဲ သံမဏိစိတ် ဓါတ် ရှင်၊ အင်ဒိုနီးရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည် မှာလဲ သူမလိုထူးချွန်သူအရပ်သားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ ဇော် အောင်
8. JOKOWI Indonesia သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ၊ တခါကပရိဘောကလုပ်ငန်းရှင်၊ ဂျာကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး-လဘ်စားမှုကင်းသူ၊ လာဘ်စားသူများနဲ့လည်း အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သူ၊ ပြည်သူကြားထဲဆင်းတဲ့၊ လူထုနိုင်ငံရေးသမား အင်ဒိုနီးရှားလူထုက သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရှုံးသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ပရာဗိုဝိုက ၄၇%တောင် ရတယ်ဆိုတော့၊ စစ်အာဏာရှင်များကို ထောက်ခံသူ တော်တော်များတယ်။ တောရွာများက ပေးဆိုကြောက်လို့ပေးရတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် အားရစရာပါပဲ။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ လက်ရှိသမ္မတ ယိုဒိုရိုနို ၁၀နှစ် (၂ကြိမ်သက်တမ်း) လုပ်ခဲ့သူက စစ်တပ်အရာရှိများကို ထိမ်သိမ်းပေးပါတယ်။ တရာမျှတမှုကို ဖြစ်စေပြီး၊ သီခြားလွတ်လပ်တဲ့ မဲရေတွက်၊ ခန့်မှန်းတဲ့အဖွဲ့များကလည်း တရားမျှတရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ မဲလိမ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကြိုတင်မဲ ပုံစံ နည်းပါတယ်။ ရလဒ်တွေ ပြောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ ၂၀ကျော် ရှိပါတယ်။ ပရာဗိုမို ပါတီကလည်း ချက်ချင်းလို သူတို့အနိုင်ရပြီလို့ ကြေညာလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ကော်မရှင် ကျေညာတဲ့ အဆုံးထိစောင့်ကြည့်ရပါတယ်။ အများစုကတော့ ဂျိုကိုဝီ အနိုင်ရရှိသွားပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ Indonesian presidential candidate Joko Widodo, popularly known as "Jokowi", left, and his wife Iriana, show their inked fingers after casting their ballots during the presidential election in Jakarta, Indonesia, Wednesday, July 9, 2014. As the world's third-largest democracy began voting Wednesday Page 1
9. JOKOWI Indonesia Indonesia, Wednesday, July 9, 2014. As the world's third-largest democracy began voting Wednesday to electanew president, Indonesians are divided between two very different choices:aone-time furniture maker, Jakarta Governor Joko Widodo, andawealthy ex-army general with close links to former dictator Suharto, Prabowo Subianto. (AP Photo/Dita Alangkara) ******************* ဇူလိုင်၉ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မည် အင်ဒိုနီးရှားသည် လူဦးရေသန်းပေါင်း ၂၄၀ကျော်၊ ကျွန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်၊ မဲပေးနိုင်သူ ၇၅သန်း မှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အရပ်သားအင်ဂျင်နီယာဘဝမှာ ဂျာကာတာမြို့ဝန်သို့ တက်လှမ်းလာခဲ့သူ ဂျိုကိုဝီ ဟုခေါ်ခံရသူနှင့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဘဝမှ အစိုးရဝန်ကြီး၊ ရာထူးကြီးများရရှိလာသူ ပရာဗိုမို တို့ပြိုင်ကြမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ အသွင်မတူသူ ၂ဦး၊ တစ်ဦးကို ပြည်သူများက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရပေတော့မည်။ လက်ရှိသမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ယိုဒိုယူနိုသည် ၅နှစ် ၂ကြိမ်သမ္မတရွေးခံရပြီးသည့်နောက်၊ ထပ်မံအရွေးမခံရတော့ပေ။ Page 2
10. JOKOWI Indonesia ၁၉၉၈ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ ဆူဟာတို မဖြစ်မနေ၊ အနားယူသွားပြီးနောက် သမ္မတ၄ဆက် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်း နှစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို လျှော့ချခဲ့သည်။ သမ္မတကိုလည်း တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်သော စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ စစ်တပ်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ နိုင်ငံရေးတွင် စိုးမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယခု ၁၀နှစ် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော SBY ဟု ခေါ်ကြသော သမ္မတယိုဒိုယိုနိုသည် အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်မည်ဟု လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိအာဏာနှင့်ရာထူး ရရှိထားသူများ၏ ဖိအားပေးမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် တောင့်မခံနိုင်သောကြောင့်၊ အဂတိလိုက်စားမှုများကို ပြောသလို၊ လုပ်မရနိုင်ဖြစ်နေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားအချမ်းသာဆုံး Bakris ဆိုသူ သူဌေးကြီးကို ဂိုကာပါတီက ဥက္ကဌခန့်ထားပြီး၊ နာမည်ပျက်များထွက်နေသည့်ကြားက သူ့ကိုပင် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ညီညွတ်ရေးဟု ဆိုကာ၊ သူ့ကိုပင် ရာထူးကြီးကို တိုးပေးထားရသည်။ နာမည်ကောင်းရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုလားသော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Sri Mulyani ကို ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရသည်။ PR ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင့်သုံးသောကြောင့် သမ္မတ၏ ပါတီလည်း လွှတ်တော်တွင် မဲအများစုမရှိသဖြင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖြစ် အုပ်ချုပ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ခြုံကြည့်လျှင် သမ္မတ ယိုဒိုရိုနိုအစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကို အတိုင်တာတစ်ခုအထိ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အမြင်ချင်းမတူသော သမ္မတလောင်း ၂ဦးမှာ တီဗွီစကားစစ်ထိုးခြင်း ၅ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်သည်။ မဲစစ်တမ်းကောက်မှုများတွင် ယခင်က ဂျိုကိုဝီ အပြက်အသာရရှိသော်လည်း၊ ယခုအခါ ဂျိုကိုဝီ နှာတဖျားအသာဖြင့်သာ ဦးဆောင်နေသည်။ မည်သူအနိုင်ရမည် မသေချာတော့။ မဲဝယ် ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုများဖြင့် နည်းပါးမည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ စစ်တပ်အရာရှိများက ပရာဗိုမိုကို မဲထည့်ရန် ဆွယ်နေကြသဖြင့် သမ္ပတကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးလုပ်လိုပါက စစ်တပ်မှထွက်ပြီးလုပ်ရန် သတိပေးရသည်။ ဂျိုကိုဝီ မှာ ပြည်သူလူထုကြားသို့ ဟိတ်ဟန်မရှိ ဝင်ထွက်သွားလာ၊ အကြံယူပြီး အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ပရာဗိုမို မှာ ပြည်သူလူထုကို လမ်းညွှန်ပြသအုပ်ချုပ်သော စနစ်ဖြစ်သည်။ အဂတိလိုက်စားမှုများဖြင့် အောက်ခြေအဆင့်မှ၊ ထိပ်တန်းရာထူးများအထိ အဂတိမကင်းနိုင်အောင် ဖြစ်နေသောကြောင့် နောက်အစိုးရတက်လာလျှင် သိသာသော အပြောင်းအလဲများကို ပြည်သူများက မျှော်လင့်ကြသည်။ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကောမရှင် (KPK) လည်း သမ္မတမှ အကာကွယ်မပေးထားသဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ ထိုနှစ်ဦးကို ပြည်သူများက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ် ကြမည်။ အင်ဒိုနီးရှား အပြောင်းလဲသည် မြန်မာပြည်အတွက် စံထားရသဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးမခသတင်းဆောင်းပါး (Photo: the Voice) ********************* General Elections Commission (KPU) on July 8, 2014 at 9:14 am Wealth announced by election commission (here – converted to US$). Prabowo Subianto owner of 20 business companies which worth US $147.7 millions. While Jokowi wealth is US$ 1.6 million. Indonesia politician has to declare their wealth. Winner will most likely be known tomorrow evening. Election survey LSI poll ,Jokowi lead 46-42 per cent. But late surge – retired general Probowo could win by 53-47 per cent. Page 3
11. JOKOWI Indonesia အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားစတိုင် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင် JOKOWI ပိုစတာဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ လက်ရှိ ဂျာကာတာမြိုတော်ဝန် ဂျိုကိုဝီ ဟု လူသိများပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါသည်။ လောလောဆယ် ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄ ဂျာကာတာ ရေလွှမ်းမိုးကာ အိမ်ပေါင်း ၇ထောင်ကျော် ရေမြုတ်နေပြီး၊ လူပေါင်း ၂၅၀၀၀ ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေပါသည်။ " ရေဆီးတားတွေ ပြင်ဖို့ ယန္တရားကြီးတွေနှင့် လုပ်နေပါတယ်။ မြစ် ၁၃ခု မြို့ထဲစီးဝင်တဲ့ ရေတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် အနီးနားက သစ်လုပ်ငန်းများက သစ်တောခုတ်လှဲများ ရပ်ဆိုင်းပြီး စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်တောဖြစ်ဖို့ အစိုးရ၏ အကူညီလိုပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားများလဲ မြောင်းများ မပိတ်ဆို့ဖို့ အမှိုက်စနစ်တကျပစ်ဖို့ လိုပါတယ်..." ဟု မြို့တော်ဝန် ဂျိုကိုဝီ ကပြောပါသည် ။ ဒါတွေ လုပ်ဖို့ ဂျာကာတာမြို့အဖွဲ့နှင့်မရပါ၊ ဗဟိုအစိုးရလည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုကြောင်း ပြောပါသည်။ ရေစုတ်ပန့်များစွာ အလုပ်လုပ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဂျာကာတာ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁ ခုမှာ ရေကြီးနေကြောင်း၊ ဂျာကာတာ ရဲဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သူ့ကို ဂျာဗားကျွန်းအလယ်က လူဦးရေ၅သိန်းခန့်ရှိသော ရှေးဟောင်းမြို့တော် Surakarta မြို့တွင် ၁၉၆၁ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ယခု ၅၂ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၅ သစ်တောဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိပြီး နောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီအလုပ်၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆူကရာတာမြို့ဝန် ရာထူး အတွက် သူ့ကို ယှဉ်ပြိုင်စေရာမှာ အနိုင်ရရှိပြီး ၂၀၀၆ ဆူကရာတာမြို့ဝန်ဖြစ်လာပါသည်။ သာမန် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး မြို့ဝန်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား သံသယဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ယူဒိုယိုနို မြို့ဝန်လုပ်ခဲ့ဖူးသော မြို့လည်းဖြစ်ပါသည်။ သူတာဝန်ယူပြီး မကြာခင် သူ့၏ အရည်အချင်များကို တွေ့လာရပါသည်။ သူ လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် ဥရောပမြို့တော်တော်များများကို ရောက်ခဲ့စဉ်က ထိုမြို့များ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်မှု Page 4
12. JOKOWI Indonesia နမူနာများစွာအတုယူပြီ ဆူကရာတာမြို့အတွက် သင့်လျှော်အောင် ကော်ပီ လုပ်ဆောင်စေပါသည်။ သူ နိုင်ငံခြား သွားလာနေစဉ်ကာလ သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သည်ဆိုတာ သေသေချာချာ လေ့လာ၊ ဆည်းပူးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့လေ့လာပြီး မှတ်တမ်းတင်မှုများသည် သူကိုယ်တိုင် မြို့တော်ဝန် ဖြစ်လာချိန်တွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံး၊ အကောင်ထည်ဖေါ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ယခင် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်များလို ဟိတ်ဟန်မရှိ၊ ပုံစံခြားနားပါသည်။ ပြည်ထုနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများတွင် လူငယ်များက ဂျိုကိဝီ လက်ကိုဆွဲပြီး သူတို့ခေါင်းပေါ်တင်ကြပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် လူငယ်တွေက လူကြီးကိုလေးစားကြောင်း ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆူရာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လုပ်ဆောင်မှုများ - သူ့မိသားစုကို မြိုတော်၏ ကန်ထရိုက်တွင် လုံးဝ၊ တင်ဒါမဆွဲခိုင်းပါ။ အဂတိလိုက်စားမှုမရှိ၊ သန်ရှင်းခြင်း။ - မြို့၏ ရိုးရာမပျက် ဈေးကြီးတည်ထောင်ပေးခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များမှာ ရှေးဟောာင်းပစ္စည်းဆိုင်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းဆိုင်များပါဝင်ပါသည်။ - မြို့လည်ခေါင် လမ်းမတွေကြား လူများလမ်းလျှောက်ဖို့ ၃မီတာကျယ်ပြီး၊ ၇မီတာရှည် လမ်းကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း - မြို့၏ ပန်းခြံကြီးနှစ်ခုကို စည်ပင်သာယာ၊ လှပအောင် အပမ်းဖြေစခန်းအဖြစ် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း - မြို့ထဲမှ သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ခြင်းကို ဥပဒေဖြင့်တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်း - "ဂျာဗားစိတ်ဓါတ်" ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ဂျာဗာကျွန်းယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်ပြီး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်စေခြင်း - မြို့ကို ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ပြပွဲများ၊ ကြော်ငြာပွဲများ ဗဟိုအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးခြင်း - သူကိုယ်တိုင် မြို့အနှံ့အပြားအရောက်သွားပြီး၊ ဒေသခံလူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အပြစ်တင်ခြင်းကို ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခြင်း - ကျန်းမာရေးအာမခံ ထားခြင်းကို မြို့သူ၊ မြို့သား အားလုံး ပါဝင်စေခြင်း၊ - မြို့လူထု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၂ထပ်၊ ဘတ်စ်ကားကြီးများ၊ မိုနို ရထားလမ်းများ ပြေးဆွဲစေခြင်း - Solo Techno Park စက်မှုဇုံတစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားလုပ်၊ မော်တော်ကားများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ "Solo: The Spirit of Java" ဆိုင်းဘုတ် အောင်မြင်စွာ၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မြို့ထဲမှာရှိသော အဟောင်းပစ္စည်း၊ ဈေးဆိုင်အားလုံး မြို့ပြင် ဥယဉ်တခုဆီရွှေ့ခြင်းကို တဖြေးဖြေး၊ ညင်သာစွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ မြို့ကြီးများအင်္ဂျါနှင့် အညီ မြို့လည်မှာ သစ်ပင်များ စိမ်းစိမ်း၊ စိုစို စိုက်ထားဖို့ နေရာများကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ မြို့လည်ခေါင်လည်း ပြန်လည် စိမ်းလန်းစိုပြေ လာပါသည်။ မြို့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် စီးပွားရေးသမားများပါဝင်လာရာတွင် မမှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများကို မြို့ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်ပယ်ပစ်ပါသည်။ မကြာခင် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ ဆူကရာတာမြို့ကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေခံမြို့များအဖွဲ့အစည်း Organization of World Heritage Cities ၏ အသင်းဝင်အဖြစ် လက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း၏ ပွဲတော်ကြီးများ ဆူကရာတာမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈မှာ ကမ္ဘာတေးဂီတပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြို့၏ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင်နေရာများကို မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ အသုံးမကျတဲ့နေရာများကို ဘူတိုဇာနှင့် တိုက်ဖျက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ Page 5
13. JOKOWI Indonesia ဂျိုကိုဝီ ၏ စတိုင်မှာ "Can-do" လုပ်နိုင်ပါသည်.. ဆိုသည့်အတိုင်း၊ အောင်မြင်စွာ မြို့ရပ်မိဘများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်များ၏ တခဲနက် လုပ်အားပေးမှုများ တွေ့ရပါသည်။ မြို့ရပ်လူထု ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံထားသူများ သွေးစည်းစေပြီး၊၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင်လဲ အောင်မြင်ပါသည်။ သူကိုယ်တိုင် အခက်အခဲများကို ပါဝင်၊ ကျော်လွှားဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မြို့တော် မြူနီစပါယ်က လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကော်ပိုရေးရှင်းကို ဓါတ်အားခငွေ ကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်းနီးပါး အကြွေး ပေးစရာရှိပါသည်။ ခရစ်စမတ်ပွဲကို တမြို့လုံး ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွဲနေသည့် ညမှာ အစိုးရလျှပ်စစ်ကော်ပိုရေးရှင်းက မီးဖြတ်တောက်လိုက် ပါသည်။ မြို့ မြူနီစပယ်အဖွဲ့က အကြွေးပေးဖို့ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ အတင်းအကြပ် အကြွေးတောင်းတာမျိုး နိုင်ငံတော်လျှပ်စစ်ကော်ပိုရေးရှင်းက နောက်နောင်မလုပ်ဖို့၊ မြို့သူမြို့သားများဖက်ကလည်း ပြန်ကြည့်သင့်ကြောင်း ကန့်ကွက်စာထုတ်ပါသည်။ ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါး အင်ဒိုနီးရှားငွေများ အထုပ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ စုဆောင်းပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကော်ပိုရေးရှင်း ရုံးကို မြို့တော်ဝန် ဂျိုကိုဝီ ကိုယ်တိုင် သွားပေးခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာများ ခေါင်းခံစရာရှိလျှင် ကိုယ်တိုင် ဝင်ရှင်းပေးသူ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ်ရွေးခံရခြင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၁၀သန်းရှိသော ဂျာကာတာမြို့ဝန် ရာထူးကို လက်ရှိမြို့တော်ဝန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာ အနိုင်ရရှိပြီး၊ အရွေးခံရပါသည်။ သူ၏မြို့ ဆူကရာတာမြို့ဝန် ရာထူးကိုလဲ မဲပေါင်း ၉၀%ဖြင့် ဒုတိယသက်တမ်း ဆက်အရွေးခံရသည့်အတွက် ဆူကရာတာမြို့ဝန်ရာထူးကို လက်ထောက်ဖြစ်သူ လွှဲပေးပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ကြီး ဂျာကာတာကို ပြုပြင်ပြောင်လဲဖို့ ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ယခု ဂျာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရပြီး၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာလဲ ဘာမှထူးခြားစွာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တခုပဲ..သူ့၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ စတိုင်ဖြစ်တဲ့ မြို့ရပ်၊ လူထုများနဲ့ ထိတွေ့ရ လမ်းကြားတွေထိသွာပြီး၊ စကားပြော၊ သူတို့၏ တိုင်တန်းချက်များကို နားထောင်ခြင်းကို ဆူကရာတာမြို့ဝန် လုပ်ခဲ့စဉ်ကအတိုင်းပါပဲ။ ဒီနည်းနှင့် လူများ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကို အားပေးလှို့ဆော်ပါသည်။ ရာထူးလက်ခံပြီး ရက်၁၀၀ အကြာမှာ ဂျာကာတာပိုစ် သတင်းစာကြီးက အရည်ချင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ခံရေးသားပါသည်။ သူ့၏နည်းလမ်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ လုပ်ငန်းပေါ်လစီနှင့် လူထုဆီထိအောင် သွားရောက်ခြင်းသည် အလွန်ထိရောက်ကြောင်း၊ သူ၏ အခမဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်လစီ၊ အခမဲ့ပညာရေးပေါ်လစီများ၊ ဂျာကာတာမှာ မြေအောက်လှိုင်ဂူ ကားလမ်းကြီးဖောက်ရန်၊ မြို့တွင်း ကားကြပ်မှုအတွက် မြို့ထဲဝင်တဲ့ကားများ အခွန်ကောက်ခြင်း ERP စနစ် စတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အခက်ခဲများရှိသော်လည်း ကျေနပ်ကြောင်း၊ ဂျာကာတာမြို့သားများ၏ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူးခဲ့ပါသည်။ ဂျာကာတာမှာ ကျန်းမာရေးအာမခံ ၂၀၁၂ စီမံကိန်းအကောင်ထည်ဖေါ်ရာ လူကြိုက်များလှပြီး ဆေးရုံများစွာက ပါဝင်လျှောက်ထားကြသည်။ လူများစွာ ပါဝင်ပြိး ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကြောင့် စရိတ် ၇၀% ပိုပြီးကုန်ကျလာသည်။ ဆင်းရဲသားများကို အဓိကထား အခမဲ့ဆေးကုခြင်းကို လူလတ်တန်းစားတွေလည်း ဝင်ပြီးတန်းစီ၊ ကုသခံယူသည်။ နောက်ဆုံး လူတစ်ဦးစီ တန်းစီနေသော နေရာကို ဒေါ်လာ၁၅ နှုန်းနှင့် တန်းစီရောင်းစား သည်အထိ ဖြစ်လာသောကြောင့် ဝိုင်းအပြစ်တင်နေကြပါသည်။ မြိုတော်ဝန်ကတော့ ခုခံပြောဆိုပြီး ယုံကြည်မှုနှင့် ဆက်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ သူက ဂျာကာတာမြို့၏ အုပ်ချုပ် ဗျူရိုကရက်ရေးအရာရှိကြီးများ ကို စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နာမည်ကျော် အဂတိလိုက်စားလှသော အင်ဒိုနီးရှားမှာ ရာထူးအရှိန်နှင့် ငွေချမ်းသာအောင် မလုပ်သူ၊ သန့်ရှင်းသူအဖြစ် နာမည်ကျော်ပါသည်။ ၁၅နှစ်တာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Page 6
14. JOKOWI Indonesia ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ဒီနှစ် သန့်ရှင်း၊ ပွင့်လင်းသူ၊ အဂတိမလိုက်စားသူအဖြစ် သူ့ပါတီခေါင်းဆောင် မဂ္ဂါဝတီ ထက်ပင် လူကြိုက် အလွန်များနေပါသည်။ ၂၀၀၈ ခု အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမိုင်း အကောင်းဆုံးမြို့တော်ဝန် (၁၀)ဦးစာရင်းဝင် ဖေါ်ပြခံရပါသည်။ ၂၀၁၁ သမ္မတယူဒိုယိုနို၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ တွင် ကမ္ဘာ့ရာဇဝတ်မှု ထူပြောသောမြို့ကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မြို့အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အတွက် 2012 World Mayor Prize ကမ္ဘာ့မြို့တော်ဝန် တတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃ The City Mayors Foundation လစဉ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး မြို့တော်ဝန်ဆုကိုလဲ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၄ လာမည့် ၂၀၁၄ ဇူလိုင်မှာ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါသည်။ လက်ရှိသမ္မတ ယူဒိုယိုနို သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၀၉ ရွေးကောက်ပွဲ၂ခုစလုံးကို Democratic Party ပါတီနှင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိင်ငံကို ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ စနစ်အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး၊ အဂတိတိုက်ဖြက်သူအဖြစ် နာမည်ရပါသည်။ ယခင်သမ္မတရွေးပွဲ ၂ကြိမ် အနိုင်ရခဲ့သူ၊ ယခု ၂၀၁၄ တွင် အနားယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သူ့၏ပါတီက သမ္မတလောင်း မကြေငြာသေးပါ။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ၆လကျော် မျှသာ လိုပါတော့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၅နှစ်တစ်ကြိမ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံကဲ့သို့ ပါတီများက သမ္မတလောင်းကို ရွေးချယ်ရပါသည်။ ပြည်သူလူထု မဲဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီး၊ မဲတစ်ဝက်ကျော်ရသူကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးခံရပါသည်။ သို့မဟုတ်ရင် မဲအများဆုံးရတဲ့ ထိပ်ဆုံး၂ဦး ထပ်ပြိုင်ရပါသည်။ မြန်မာသမ္မတ ရွေးပွဲမှာ တစ်မူထူးပါသည်။ ဒု-သမ္မတ(၃)ဦးကို စစ်တပ်နှင့်လွှတ်တော်၂ခုက ရွေးပြီး ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်ကို မဲပေးရွေးစနစ်ပါ။ ပြည်သူများက သမ္မတ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ တရုပ်နိုင်ငံ ပုံစံ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိဂျာကာတာမြို့ဝန် ဂျိုကိုဝီ ၏ ပါတီမှာ Indonesian Democratic Party – Struggle ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီခေါင်းဆောင်မှာ ယခင်သမ္မတဟောင်း မဂ္ဂါဝသီ ဖြစ်ပါသည်။ သူမက "၂ကြိမ်တိုင်တိုင် သမ္မတရွေးပွဲမှာ ရှုံးထားသည့်အတွက် ဒီတစ်ကြိမ်မှာ အသက်လဲ ၆၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ ဝင်မပြိုင်တော့ပါဘူး..နောက်တက်လာတဲ့ ငယ်ရွယ်သူကို ပါတီကရွေးပါမယ်" ဟု ဖြေပါသည်။ လောလောဆယ် သူ့တို့ပါတီက ဂျာကာတာမြို့ဝန် ဂျိုကိုဝီ လူကြိုက်များလျှက်ရှိပါသည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင် ဂျိုကိုဝီ ၏ လူတန်းစားခွဲခြားမှု မရှိကြောင်းကို သူရွေးထားသော လက်ထောက် ဂျာကာတာမြို့တော်ဝန်ကို ကြည့်ပါ။ ခရစ်ယန်၊ တရုပ်အနွယ် Ahok ဆိုသူ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများကို ခံစားနေရသူဖြစ်ပါသည်။ ဂျိုကိုဝီ သမ္မတအရွေးခံလျှင် Ahok ဂျာကာတာမြို့ဝန် ဖြစ်မည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အစိုးရ၏ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေး KPK အဖွဲ့ရှိပါသည်။ မကြာခဏ အရေးယူမှုများနှင့် အဂတိပြဿနာ ကျဆင်းမသွားပဲ၊ ပိုဆိုးလာသလို ဖြစ်နေပါသည်။ ဂီတနှစ်သက်သော ဂျိုကိုဝီ လက်ခံယူလိုက်သည့် လက်ဆောင် Metallica တေးဂီတအဖွဲ့က လက်မှတ်ထိုးပြီး ပေးခဲ့သော လျှစ်စစ် ဘော့စ်ဂီတာ တစ်လက် ရှိပါသည်။ KPK အဖွဲ့က သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး ပြတိုက်မှာ လူထုကို ပြသထားပါသည်။ ဂျိုကိုဝီ က သူ့ကို သမ္မတ ဖြစ်ဖို့မြှင့်တင်နေသူများကို .." ကျွန်တော့်ဘဝဟာ ရိုးစင်းလှပြီး ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက် သမ္မတအဖြစ် မထိုက်တန်ပါဘူး ... ဟု ပြောဆိုပါသည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဂျိုကိုဝီ လူကြိုက်များလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကို သမ္မတအရွေးမခံရလျှင်လဲ ယိုယွင်းနေသော Page 7
15. JOKOWI Indonesia အင်ဒိုနီးရှားမြို့တော် ဂျာကာတာကို ကမ္ဘာ့အဆင့် ပြုပြင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည် မြို့ကြီးများ မန္တလေး၊ ပုဂံ၊ မော်လမြိုင်၊ တောင်ကြီး၊ မုံရွာ စတဲ့မြို့များမှာ ဂျိုကိုဝီ ကဲ့သို့သော အရည်ချင်းရှိသူများစွာ ရှိပါသည်။ ဂျိုကိုဝီ ကဲ့သို့ မြိုတော်ဝန်များစွာ မြန်မာပြည်တွင် ပေါ်ထွက်လာဖို့.. မျှော်လင့်ပါသည်။ ဇော်အောင်(မုံရွာ) Page 8
Puntiko futbol txapelketa 2014 uztailak 21 juillet
ACME Presentation about equality and same opportunities
Marcileneribeiro unidade i-ativ5
Maduración y conservación de fruver acti 2
Pop-up Banner Colorful Text
Estatuto criança adolescente_comentado